खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो, कसरी पुग्ने खप्तड ? | Margadarsannew.com
खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो, कसरी पुग्ने खप्तड ?
मार्गदर्शन १० फाल्गुन २०७७, सोमबार
डोटी । कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएसँगै सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुक भारतबाटसमेत पर्यटक आउन थालेपछि पछिल्लो समय खप्तडमा चहलपहल पनि बढ्दै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । सुन्दर खप्तड क्षेत्रको अवलोकन गर्न हिजोआज दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ आउने गरेका खप्तड पर्यटन विकास समिति डोटीले जनाएको छ ।
खप्तड क्षेत्रमा चारैतिर घनघोर जङ्गल र बीचमा ठूला फाँट छन् । जैविक विविधताले भरिएको यो क्षेत्र विसं २०४० देखि निकुञ्ज बनेको हो । यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि विसं २०४७ देखि नेपाली सेनाको छावनी (गुल्म) स्थापना गरिएको सुदूरपश्चिम पृतना मुख्यालय दिपायल राजपुरले जनाएको छ । खप्तडमा २०० भन्दाबढी प्रजातिका फूल र बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् ।
मंसिरदेखि फागुन महिनासम्म यो ठाउँ हिउँले ढकमक्क हुने गदर्छ । खप्तड पुग्ने धेरै बाटो भए पनि डोटीको बग्लेक हुँदै जाने बाटो बढी प्रचलनमा छ । पहिलो दिन काठमाडौँबाट हवाइजहाज वा बसबाट धनगढी पुगेपछि त्यहाँबाट डडेल्धुराको स्याउले बजार हुँदै डोटीको सदरमुकाम सिलगढी पुग्न बसबाट करिब सात घण्टा लाग्छ । सिलगढीबाट बिचपानीसम्म करिब दुइ घण्टा कच्ची सडक गाडीबाट हिँडेपछि पैदल वा घोडा मगाएर खप्तड प्रस्थान गर्दा हुन्छ । बिचपानीबाट हिँडेपछि ठूला चट्टान र घना जङ्गलको बाटो आउँछ । बाटोमा फुलेका रङ्गीचङ्गी फूलहरू नियाल्दै जाँदा केही घण्टामै त्रिवेणी मन्दिर पुगिन्छ । सिलगढीबाट हिँडेको दोस्रो दिन खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आरामसँग पुग्न सकिन्छ । खप्तड जानुभन्दा अघि पाल, स्लिपिङ ब्याग र खाना पकाउने सामानसँगै लिएर जानु उत्तम हुन्छ ।
काठमाडौँबाट खप्तड पुग्न, घुम्न र फर्कन धेरै खर्च लाग्दैन । काठमाडौँबाट जहाजमा जाने हो भने रु चार हजारदेखि १२ हजारसम्मको टिकट लाग्छ धनगढी पुग्न । बसमा जाने हो भने रु एक हजार ५०० कैलालीको अत्तरिया बजारसम्म गाडी भाडा लाग्छ ।
बझाङ जिल्ला भएर जाने हो भने प्रतिव्यक्ति रु ८०० गाडी भाडा लाग्छ । यसो गर्दा मेल्तडीमा खाना खाएर हिँडेर नै जानुपर्छ, दिउँसो २÷३ बजे नै खप्तड पुगिन्छ । डोटीबाट जाँदा अत्तरियाबाट करिब सात घण्टामा डोटीको सदरमुकाम सिलगढी पुगिन्छ भने सिलगढीबाट करिब तीन घण्टामा झिग्राना बजार पुगिन्छ । झिग्रानाबाट करिब सात घण्टाको पैदल हिँडेर खप्तड पुग्न सकिन्छ । करिब एक हप्ता खप्तड घुम्ने गरी भ्रमणमा जाँदा काठमाडौँबाट गएर काठमाडौँ पुग्न (खान, बस्न, टिकट, अन्य खर्च) न्यूनतम रु १० हजारजति लाग्न सक्छ । खप्तडमा खाने र बस्ने राम्रो व्यवस्था छ । खप्तडमा पानी प¥यो भने सहनै नसक्ने जाडो हुन्छ । क्षण–क्षणमै मौसम परिवर्तन हुन्छ । पानी पर्दा फाँटहरू एकैछिनमा जलाशयमा परिणत हुन्छन् । आकाशको पानी बन्द हुनेबित्तिकै एकैछिनमा जम्मा भएको पानी सबै बगेर ओभानो हुने गर्दछ । – रासस
मुलुकलाई एकताबद्ध गराउन स्रष्टाको उल्लेख्य योगदान छ : राष्ट्रपति
सर्वोच्चले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ : प्रवक्ता गुरुङ
दाह संस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा : मन्त्री आले
‘अब क्यान्सर उपचारका लागि विदेश जानुपर्दैन’
दाहाल–नेपाल पक्षको स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने
हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी
म्यानमारमा प्रहरीको गोली लागेर १८ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु